Maxkamadda CQS oo Xukuntay Labo ka Tirsanaa Ururka Daacish+Sawirro – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Maxkamadda CQS oo Xukuntay Labo ka Tirsanaa Ururka Daacish+Sawirro
Xuseen Cali Maxamed Muudey oo magiciisa afarashadu yahay Suheyb iyo Cabduqaadir Xaafid Xaaji Cali oo magiciisa afgarashadu yahay Qudaama ayaa loo heystaa kamid ahaanshiyahaDaacish.
Labada eedeysane ayaa mar kawada tirsanaa Al-shabaab, waxa ayna sii doorteen in ay ku biireen daacish oo ay sheegeen in ay jireen sababo ku riixayay ku biiristooda kuwaasi oo ku qatoma dana shaqsi sida aar-gudasho iyo hanti.
Eedeysanaha koowaad ayaa sheegay in uu ku biiray Alshabaab 2014, waxa uu kaga biiray tuulada lagu magacaabo Moordiinle, waxa uu sheegay in uu ku tashkiiliyay nin uu sheegay in uu qabo gabar abtigii dhalay, waxa uu sheegay in dhowr cisho loo taba-barayay isticmaalka hubka sida qoriga AK-47.
Intii uu Alshabaab katirsanaa ayaagowraceen adeerkiis, intaas kadib ayuu sheegay in ay maleesiyada daacish u soo bandhigeen kamid noqosho ururka, waxa uu sheegay in loo soo diro lacag uu safar ugu baxayo Gaalkacyo si’ halkaasi uu uga sii qaado mid kamid daacish oo ujeedkiisu ahaa meel ay ku sheegeen buuraha Calmiskaat ooDaacish gabaad u ah.
Taba-bar kale oo dheeraad ah ayaydaacish sii-yeen, waxa uu ku sii bartay Ak-47, B.K.M iyo RPG.
Sida uu sheegay waxa uu Daacish kaga soo tegay markii ay dileen saaxiibbo badan oo ka yimid Alshabaab kuwaasi uu sheegay in loo arkay in ay ka fikiri duwan-yihiin ayna sidoo kale u yihiin basaa-siin.
Ciidamada amniga ayaa soo qabtay xilli ay u soo wakiilatay dhagridda dadka Soomaaliyeed.Eedeysanaha koowaad ayaa la soo xiray 14/11/2018.
Eedeysanaha labaad ayaa sidoo kale ahaa mid katirsan Alshabaab, waxa uu kaga biiray Alshabaab tuulada moordiinle. 2014 horraanteedii, waxa uu sidoo kale ka shaqeeyay tuulooyin kale sida Janaale, Awdhiigle.
Muddo kadib ayuu ku biiray Daacish 2016, waxa uu kaga biiray Weydow. Waxa uu u baxay dhulkan bari ee Boosaaso, waxa uu tababar ku qaata buuraha gobalka.
Labada eedeysane ayaa isku aqoonsaday halka ay ka socotay baaristooda, waxa ay u sheegeen hey’adaha baarista in ay kawada tirsanaayeen Daacish.